गर्भ खेर गएपछि अस्पतालबाटै बच्चा चोरी ! – Daunne News
गर्भ खेर गएपछि अस्पतालबाटै बच्चा चोरी !
धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट मध्यरातमा नवजात शिशुको चोरी भएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिका १५ माइती भई भारतीय नागरिकसँग विहे गरेकी लीला विकले आफ्नी भाउजुसँग मिलेर १३ दिनको शिशु चोरी गरेको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीले लीला र उनकी भाउजु मीना लिम्बु (बिक)लाई पक्राउ गरेको छ ।
लक्ष्मीले अस्पतालबाट शिशु लिएपछि धरान उपमहानगरपालिका १५ बगरकोटमा आफ्नो माइतीघरमा भाउजु मिना लिम्बु विश्वकर्माको जिम्मा लगाएकी थिइन् । प्रहरी राति नै त्यहाँ पुग्दा घरको पश्चिमतर्फको कोठामा नवजात शिशु राखेको देखेपछि उद्दार गरी आमाको जिम्मा लगाएको हो । @onlinekhabar.com